Lufthansa waxay dib u bilawday duulimaadyadeedii qaaliga ahaa ee Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya ee Madaarka Munich
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Lufthansa waxay dib u bilawday duulimaadyadeedii qaaliga ahaa ee Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya ee Madaarka Munich
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Maaddaama warshadaha safarka ee adduunku ku soo laabanayaan heerarkii hore ee dhaqdhaqaaqa, Lufthansa waxay xoojineysaa adeegyadeeda qaaliga ah garoonka diyaaradaha ee Munich waxayna mar labaad ku bixin doontaa fasalka koowaad waddooyinka la xushay.
Lufthansa waxay dib u hawlgelinaysaa shan Airbus A340-600 oo bixisa Fasalka Koowaad.
Lufthansa Airbus A350-900s si loo bixiyo Fasalka Koowaad illaa xagaaga 2023.
Laga bilaabo xagaaga 2022, A340-600 wuxuu ka duuli doonaa Munich ugu horeyn wuxuuna tagayaa Waqooyiga Ameerika iyo Asia.
Madaarka Munich waa xarunta kaliya ee 5-xidig ee Yurub ah sannado badan waxayna caan ku tahay rakaabka Lufthansa, adduunka oo idil, ma aha oo kaliya marinka Bavaria, laakiin waa hormuud, madaarka qiimaha leh ee bixiya safarka safarka dhiirrigelinta ah.
Hadda maadaama warshadaha safarka ee adduunku ay ku soo noqonayaan heerarkii hore ee waxqabadka, Lufthansa waxay xoojineysaa adeegyadeeda caymiska laga bilaabo Madaarka Munich oo markale waxay ku bixin doontaa Fasalka Koowaad dariiqyada la xushay. Tan macnaheedu waxa weeye, Lufthansa waxay si ku-meel-gaadh ah u hawlgelinaysaa shan diyaaradood oo kuwa dhaadheer oo ah Airbus A340-600 oo leh afar fasallo duulimaad, oo ay ku jiraan abaalmarintii ku guuleysatay Fasalka Koowaad oo leh sideed kursi.
Laga bilaabo xagaaga 2022, A340-600 wuxuu ka duuli doonaa Munich ugu horeyn wuxuuna tagayaa Waqooyiga Ameerika iyo Asia. Go'aanka dib u howlgelinta diyaaradahan waxaa sabab u ah baahida sii kordheysa ee sii kordheysa, ganacsiga iyo sidoo kale safarada firaaqada ah.
Dabayaaqadii xagaaga 2023, Airbus A350-900 kii ugu horreeyay, oo bixiya Fasalka Koowaad, ayaa ku soo biiri doona raxan raxan oo ka duuli doona Munich, iyagoo xoojinaya bixinta ugu sareysa ee xarunta 5-xidig ee Lufthansa.
Kahor intaanuu faafku dhicin, maraakiibta loo yaqaan 'Lufthansa Airbus A340-600' waxay ka koobnaayeen 17 diyaaradood, 12 ka mid ahna waxay ku guda jiraan iibinteeda. Shan diyaaradood oo dheeri ah hadda lama iibinayo oo si ku meelgaar ah ayaa dib loogu howlgelin doonaa loona iibin doonaa taariikh dambe.
Lufthansa waxay sii wadaa inay maal gashato casriyeynta markabkeeda. Bishii Maajo ee la soo dhaafay, kooxdu waxay iibsatay 10 diyaaradood oo casri ah oo dheeri ah: shan Boeing 787-900s iyo shan A350-900s. Kuwii ugu horreeyay ayaa shaqeyn doona xilliga qaboobaha. Sannadkan oo keliya, shirkadda Lufthansa waxay bil kasta ka qaadaysaa diyaarad cusub oo ah nooca Airbus oo aan shidaal lahayn oo ka timaadda qoyska A320neo. Bixinta 107 diyaaradood oo dheeri ah Airbus A320neo diyaaradeed ayaa la qorsheeyay ilaa 2027.